သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစမတ်နာရီတစ်လုံးဝယ်ရန်သော့ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များ | Gadget သတင်း
Villamandos | | စမတ်နာရီ
လအနည်းငယ်အကြာနှင့်အချို့သောတစ်နှစ်သည် စမတ်နာရီ ဒါမှမဟုတ်တူညီတဲ့စမတ်နာရီကဘာလဲ။ ကန ဦး သံသယများပြီးနောက်၎င်းတို့သည်စျေးကွက်တွင်ရောက်ရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးလူများသည်သူတို့၏လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင်ဝတ်ဆင်ထားကြပြီး၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အားအများဆုံးပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ရွေးချယ်စရာများကိုအမြတ်ထုတ်နေပုံရသည်။
၀ ယ်ယူရန်ရရှိနိုင်သောမော်ဒယ်လ်အရေအတွက်အလွန်များပြားလာပြီးလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကမော်ဒယ်တစ်ဒါဇင်ကိုသာရွေးချယ်နိုင်လျှင်စမတ်နာရီကိုဝယ်ယူရန်အခက်အခဲများစွာရှိနေသည်။ ယနေ့သင်သည်သင်၏လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တွင် ၀ တ်ဆင်ရန်ဤကိရိယာများကိုရှာဖွေနေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်အတူကူညီပေးပါမည် လုံခြုံစိတ်ချစွာ ၀ ယ်ရန်နှင့်မှန်ကန်စွာဝယ်ယူရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအချက်များ.
သင်၏စမတ်နာရီအသစ်ကိုဝယ်ယူရန်အတွက်အစစ်အမှန်အကြံဥာဏ်များကိုမလေ့လာမီ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ဈေးနှုန်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးကိရိယာကိုအလျင်အမြန်မဝယ်ပဲအရေးကြီးသည်ဟုသင်ပြောရမည်။ ထို့အပြင်ဤအမျိုးအစားရှိပစ္စည်းအားလုံးသည်စမတ်ဖုန်းအသစ်နှင့်အဆင်ပြေနိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စမတ်နာရီ ၀ ယ်ရန်စဉ်းစားနေပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်တို့၏အကြံဥာဏ်များကိုအထူးဂရုပြုပါ။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းတို့ကိုလိုက်နာပြီးမှန်ကန်စွာလိုက်နာပါကသင်၏ကိရိယာအသစ်ကိုဝယ်ယူသောအခါသင်မှန်လိမ့်မည်။
4 ဒီဇိုင်း၊ ပြသခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်း
ယနေ့အထိအားလုံးမဟုတ်ဌစျေးကွက်ထဲတွင်ရောင်းချသောစမတ်နာရီများသည်လက်ကိုင်ဖုန်းအားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုမှာ Apple Watch ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစမတ်နာရီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မည်မျှပင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါစေ၊ Android OS ဖြင့်စမတ်ဖုန်းရှိပါက၎င်းကိုသင်မရရှိနိုင်ပါ။ အချိန်ကိုစစ်ဆေးတာထက်ပိုပြီးခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။
အချိန်တိုအတွင်းမှာ iOS နဲ့ Android operating system နဲ့စမတ်နာရီတွေကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် iPhone မှာအတူတူပါပဲ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကို Android မှာကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်နိုင်ခြေကိုမပေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တဲ့အတိုင်း Google က Apple ပစ္စည်းတွေမှာရှိတဲ့ Adroid Wear ထုတ်ကုန်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးတက်စေရန်အားစိုက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
Android Wear: Android 4.3 နှင့်အထက်နှင့် iOS 8.2 နှင့်အထက်စမတ်ဖုန်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်
OS ကိုကြည့်ပါiOS 8.2 နှင့်အထက်အလုပ်လုပ်သည်
Tizen: Samsung စမတ်ဖုန်းအများစုနှင့်၊ Asus ZenFone 2၊ HTC One M9 သို့မဟုတ် Huawei P8 ကဲ့သို့သော Android model အမျိုးမျိုးနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည်လူကြိုက်အများဆုံး operating system များဖြစ်သော်လည်းအချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် Garmin သို့မဟုတ် SPC ကဲ့သို့သောသူတို့၏ကိုယ်ပိုင် software ကိုဒီဇိုင်းဆွဲကြသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်စျေးကွက်ရှိမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အများစုသည်သဟဇာတဖြစ်သော်လည်းစမတ်နာရီကို ၀ ယ်ရန်မစတင်မှီသေချာစေရန်မှာမလွယ်ကူပါ။
ထို့အပြင်ဤအပိုင်းကိုအဆုံးသတ်ရန်အတွက်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းရှိသည့်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းမှာစျေးကွက်ရှိ asmartwatches အားလုံးသည်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် bluetooh လိုအပ်သည်။ Wearable အများအပြားသည် Bluetooth 4.0 မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းကိုလည်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ terminal တွင် Bluetooth 2.1 ရှိပါက၎င်းသည်ယူဆသောပြwithနာနှင့်ထပ်တူပြုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်ဝယ်ရန်စဉ်းစားနေသောစမတ်နာရီအားပေးမည့်အသုံး ၀ င်မှုပေါ် မူတည်၍၊။ ထို့အပြင်၎င်းကို ၀ တ်ဆင်။ သတိပေးချက်များကိုမကြာခဏအားကစားပြုလုပ်လိုခြင်း၊ အားကစားကစားခြင်းသို့မဟုတ်သင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်အတွက်သင်၏စမတ်ဖုန်းကိုမထုတ်ယူသင့်သည့်အချိန်တွင်သင်နှင့်မခွဲခွာနိုင်သောအဖော်ဖြစ်လိုခြင်းသည်မတူပါ ။
အားကစားလုပ်နေစဉ်တွင်စမတ်နာရီကိုအသုံးပြုလိုပါက၎င်းအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကိရိယာနှစ်ခုကိုမှီနိုင်သည် Moto 360 အားကစား သို့မဟုတ် Samsung Gear S2 Sport ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ကောင်းသော option ကိုပါလိမ့်မယ် Apple Watch အားကစား၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အထူးသဖြင့်စျေးနှုန်းတို့ကြောင့်အလွန်အမင်းအကြံပြုထားပုံမရသော်လည်း, ။
စျေးကွက်တွင်အားကစားလေ့ကျင့်မှုကိုအဓိကထားသည့်စျေးကွက်တွင်စမတ်နာရီများရှိသည်။ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင် WhatsApp ၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးမည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်အမြောက်အများကိုပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်မှာအချိန်၊ အီးမေးလ်များနှင့်သင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်နေ့စဉ်အတွက်စမတ်နာရီတစ်လုံးဖြစ်လျှင်ရွေးချယ်စရာများများပြားလှသည်။
ကျွန်တော်တို့အများစုလိုချင်တာက လုံးဝလွတ်လပ်သောစမတ်နာရီ။ စမတ်ဖုန်းမပါဘဲအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ လူအများစုက၎င်းကိုမတည်ရှိဟုထင်ကြသော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝမှားသည်။ ဤအမျိုးအစားတွင်ပစ္စည်းအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းစျေးကွက်တွင်အချို့ရှိသည်။
El Samsung Gear S သို့မဟုတ် LG Watch Urbane 2nd Edition LTE ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှလုံးဝလွတ်လပ်သောနည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောစမတ်နာရီနှစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့နှင့်အတူသင်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ လက်ခံခြင်း၊ အသိပေးချက်များဖြေကြားခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုဘဲအင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ပြနာကဒါပဲ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်နာရီအတွက် SIM ကဒ်ရှိရမည် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်စမတ်နာရီများအကြားကဒ်ကိုအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ခြင်းသည်အချိန်ကုန်စေသည်။
ယနေ့ဈေးကွက်တွင်စမတ်နာရီများစွာသည်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများနှင့်မတူညီသောဒီဇိုင်းများဖြင့်ရောင်းချကြသည်။ လွန်ခဲ့သောအချိန်ကပစ္စည်းအများစုသည်စတုရန်းဒီဇိုင်းရှိပြီးအဓိကအားဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်မကြာသေးမီလများအတွင်း စမတ်နာရီအများစုကိုသန့်စင်ပြီးစီးဆင်းစေသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်ဤ gadget များစွာတွင်လှပသောခါးပတ်များနှင့်ရိုးရာနာရီများနှင့်ဆင်တူသောမြို့ပတ်ရထားပုံစံရှိသည်။ Huawei Watch, Gear S2 နှင့် Moto 360 တို့သည်စမတ်နာရီ ၃ ခု၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောနမူနာများဖြစ်ပြီးမည်သူမဆို၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်မည့်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
ဒီဇိုင်းနှင့်အနည်းငယ်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်အရာသည်များသောအားဖြင့်ကြီးမားလွန်း။ ၎င်းသည်စတုရန်း၊ သင်ရှာဖွေနေသောသို့မဟုတ်လိုချင်သည့်အရာပေါ် မူတည်၍ စက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုသို့သင်မှီသင့်သည်.
နောက်ဆုံးတွင်စမတ်နာရီကိုဝယ်ယူသောအခါ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်တွင်ရှုပ်ထွေးသောစမတ်နာရီကိုစျေးကွက်တွင်ယခုအချိန်တွင်ရောင်းချခြင်းမရှိဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ Motorola, Samsung သို့မဟုတ် Pebble မှဖြစ်စေစမတ်နာရီအများစုသည်အလွန်အလိုလိုသိပြီး၎င်းတို့သည်လည်ပတ်ရန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင့်အတွက်စမတ်နာရီအသစ်ကိုစစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်အလွန်ကြာမြင့်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဤအရာအားလုံးအတွက်သင်မကြောက်ရွံ့သင့်ပါ။
နောက်ဆုံးတော့စမတ်နာရီကိုဝယ်တဲ့အခါ စျေးကွက်ထဲမှာယူရို ၂၀၊ ၃၀ နဲ့ယူရို ၁၈,၄၀၀ အထိရှိနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတာမို့ကျွန်တော်တို့စျေးနှုန်းကိုထည့်တွက်ရမယ်။ ၎င်းသည် Apple Watch ၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးဇိမ်ခံကားဖြစ်သည်။
အမှန်မှာစမတ်နာရီအများစုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ယူရို ၁၀၀ မှ ၃၀၀ ကြားရွေ့လျားလေ့ရှိသည်။ အချို့သည်ဤအကွာအဝေးမှသို့မဟုတ်အထက်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ရှိကြသည်။ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲရမည့်ငွေပမာဏကိုသိရှိရန်ခဲယဉ်းသည်။ ၎င်းသည်တစ်ခုချင်းစီရှိသည့်ဘတ်ဂျက်အပေါ်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။
စျေးနှုန်းအပြင်၊ စမတ်နာရီကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းပေးမယ့်ဘက်ထရီကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။ အဲဒါကကျနော့်အမြင်မှာဒီကိရိယာတွေကိုနေ့တိုင်းအားသွင်းရတာတကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာပါ။ Android Wear ပါသောမည်သည့်စမတ်နာရီကိုမဆိုနေ့စဉ်ပုံမှန်အားသွင်းရန်လိုလိမ့်မည်။ Pebble တံဆိပ်ပါသောသူများသည်တစ်ပတ်ခန့်အားသွင်းစရာမလိုဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။
ငါဘယ်တော့မှကြီးမားသောထောက်ခံသူသို့မဟုတ်စမတ်နာရီကိုနှစ်သက်သည်မဟုတ်ခဲ့ပေ ငါဝန်ခံရမယ်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှဤပစ္စည်းအမျိုးအစားများသည်ခံစားခဲ့ရသောတိုးတက်မှုများနှင့်ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများကြောင့်သူတို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာသည်။ ငါ့နေ့စဉ်ဘဝ၌။
ကျွန်ုပ်တွင်တစ်နေ့နှင့်ကျွန်ုပ်လုပ်မည့်အရာပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောစမတ်နာရီနှစ်ခုရှိသည်။ ငါသူတို့ဒီဇိုင်းနှင့်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဘက်ထရီထည့်သွင်းစဉ်းစားသူတို့ထဲကနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါနှင့်အတူချစ်မြတ်နိုးရသောပထမ ဦး ဆုံးစမတ်နာရီသည် Pebble ဖြစ်သည်၊ ၎င်း၏ဘက်ထရီကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အမင်းလျှော့စျေး ဖြစ်၍ မဝယ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်သတိပေးချက်များအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းအားကျန်ရှိနေသည့်ဘက်ထရီနှင့်မည်သည့်ပြcanနာမျှမရှိဘဲ ၅ ရက်ကျော်ကြာသည်အထိမေ့သွားနိုင်သည်။
အထူးနေ့ရက်များအတွက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်မိသားစုစုရုံးခြင်းသို့မဟုတ်ထမင်းစားခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည် Huawei ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ငါ၏အအကြီးမြတ်ဆုံးဘဏ္treာကိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လှပသောဒီဇိုင်း၊ အလုပ်နှင့်ကိုက်ညီသည့်ဘက်ထရီနှင့်အချို့သောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်ဤစမတ်နာရီသည်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်နေ့မှချစ်မိစေပြီးကျွန်ုပ်ဝတ်ဆင်တိုင်းအချစ်တွင် ဆက်၍ ချစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
လူတိုင်းကသူတို့လိုချင်တဲ့အရာဒါမှမဟုတ်သူတို့စမတ်နာရီကိုအသုံးပြုတော့မယ့်အချိန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အားကစားမလုပ်ပါကအားကစားကို ဦး တည်သည့်စမတ်နာရီကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အိမ်၌အိပ်ခြင်းထက်အခြားအိမ်တွင်မရပ်ပါကသင့်တွင်ဘက်ထရီများစွာပါရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်ဟာနည်းနည်းလေးကွဲပြားတဲ့နည်းနဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မယ်ဆိုရင်အရမ်းကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကောင်းတဲ့ Huawei Watch ကိုဝတ်ဆင်တာဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » စမတ်နာရီ » သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစမတ်နာရီတစ်လုံးဝယ်ရန်သော့ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များ
စစ်မှန်တဲ့ Instagram ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာဖို့အချက် ၁၀ ချက်
NBA All Star 2016 ဂိမ်းကိုကြည့်ရှုရန်